Izindaba - Thyh Metal Fabrication Finishing Services
I-Thyh Metal Fabrication Finishing Services: Ukuchithwa, Ukupholisha kanye Nokupenda
Ukuqothula nokupholisha kuyizinqubo ezibalulekile zokuqeda ekwenziweni kwensimbi, okudingekayo ngaphambi kwesinyathelo sokugcina sokudweba.
I-Deburring isusa ama-burrs okungenzeka ngesikhathi sokwenziwa kwensimbi.Nakuba ama-burr ngokuvamile emancane, angabangela izinkinga zenhlangano noma alimaze ubuqotho bezingxenye eziqediwe uma engasuswa.Inqubo yokukhipha imali iqeda lezi zingozi ezingaba khona.
Ukukhipha imali kuhlanganisa izinqubo ezihlukahlukene ezenziwa ngesandla nezamamishini:
Ukusika: Ama-drill, amafayela, ama-scrapers, amabhulashi, izindlela eziboshiwe eziboshiwe, ama-edger emishini noma ukuchithwa komshini.
Ukuxubha amandla: Kusebenzisa amabhulashi omcu wensimbi ezintweni ezihlukahlukene, izimo namasayizi.Kuyashesha futhi kuyabiza.
Ukuqedwa kwe-abrasive abrasive finishing: Indlela yokufaka isihlabathi esebenzisa amabhande, amashidi, amaphedi, amadiski noma amasondo.Ama-abrasives avame kakhulu ama-aluminium oxides, i-silicon carbide, noma izinhlanganisela ze-zirconia.
Ukuqhuma kwe-Abrasive: Kuqhutshwa umfutho womoya, ukuqhuma okuqhumayo kungenziwa kumanzi noma komile.
Ukuqedwa kwenqwaba kuvumela izingxenye eziningi ukuthi zikhokhelwe futhi ziqedwe ngasikhathi sinye.Lesi kungase kube isinyathelo sokugcina enqubweni yokuqedela yezingxenye zokusebenza.Izindlela zifaka ukuqedwa kokudlidliza, ukuwa kwemiphongolo, nokuqedwa kwe-centrifugal.
I-Electropolishing iyindlela yokususa engasebenzisi imishini, engahlanekezeli evame ukusetshenziselwa ukususa ama-burrs ezingxenyeni eziyinkimbinkimbi noma ezintekenteke.
Inqubo efanelekile yokukhipha incike kusayizi nokuma kwe-burr, nokuthi yini ezoyithatha ukuyisusa ngaphandle kokulimaza ingxenye yensimbi eyenziwe.Bonke abakhi abanekhono be-Metals banganquma izinqubo ezingcono kakhulu zokukhipha nokuqeda ukuze kuzuzwe izingxenye ezinembayo.
Le nqubo yokuqeda insimbi ingenye yezinyathelo zokugcina zokwenziwa, ngemva kokusika kwe-laser, ukwakha noma ukugoba, ukuchithwa kanye nezinye izinqubo zokwenziwa kwensimbi.Ukupholisha kususa noma yimaphi ama-miniscule burrs asele, bese kuwuqhumisa kuze kube sekugcineni.Umgomo wokugcina wokupholishwa kwensimbi indawo ebushelelezi evumelana nephrojekthi yakho.
Ukupholishwa kwensimbi kusebenzisa inhlanganisela egayayo enamathele esondweni noma ebhandeni elinikeza ukungqubuzana.Isimo sensimbi ekuqaleni kwenqubo yokupholisha yilokho okunquma uhlobo lwe-abrasive esizosetshenziselwa ukudala isiphetho esifunayo.Sinakho kokubili ubungcweti bendlu kanye nobudlelwano obubalulekile bomthengisi ukuze sifeze cishe noma yikuphi ukuqedwa kwensimbi esifiselekayo, ukusuka ku-#3 wokugaya kuya kwesibuko esingu-#8 nakho konke okuphakathi.
I-Thyh Metals Fabrication inikeza uhla olugcwele lwezinsizakalo zokwenziwa nokuqeda, okuhlanganisa ukusika nge-laser, ukugoba, ukubumba, ukuchithwa, ukupholisha nokupenda.Ukuba yisitolo esithengisa izinto zonke kusho ukuthi ungathembela ezinqubweni zekhwalithi kusukela ekuqaleni kuya ekupheleni kwephrojekthi yakho yokwenziwa kwensimbi.
Usulungele ukuthola ukuthi izinqubo zethu zokunemba zingakunikeza kanjani ukuthinta kokugcina kuphrojekthi yakho yokwenziwa kwensimbi?Cela ukucaphunalapha kanye nomunye wochwepheshe bethu bokuthengisa kanye nokulinganisa abasebenzi bazokujabulela ukukuhambisa kuphrojekthi yakho elandelayo.
Ukukhetha ukuqeda upende kuyisinyathelo esibalulekile enqubweni yokwenziwa kwensimbi.Ukuqedwa kopende okulungile kungandisa isikhathi sokuphila sezingxenye zensimbi futhi kuthuthukise ukubukeka.Sinakho kokubili olwazini lwendlu kanye nobudlelwano bomthengisi obubalulekile ukuze sifeze ukudweba okulula njengamajazi okuqala futhi okubanzi njengopende we-Kynar noqweqwe lwawo.Siyafaneleka ukunikeza ikhwalithi yopende engcono kakhulu nokuvikelwa kwanoma yiluphi uhlobo lwensimbi noma iphrojekthi.
Ukufaka upende eshidini lensimbi kufana nokufaka upende kwezinye izindawo.Siqala ngendawo yensimbi ehlanzekile ukuze sisuse noma iyiphi imfucumfucu noma ukugqwala, bese sifaka i-primer evimbela ukugqwala ezinsimbini ezisansimbi.Ijazi le-primer lilandelwa izingqimba eziningi zopende, futhi liqede nge-coating yokuzivikela.Singapenda izinsimbi eziyinsimbi nezingezona ayoni.
Izinsizakalo zokupenda kanye nejazi eliphezulu zihlanganisa:
I-primer ecebile nge-Zinc
Iziqalo ze-latex ezisekelwe emanzini
I-CARC yokuthobela amasosha iyaphela
Ithimba lethu labaklami kanye nonjiniyela bazosebenzisana nawe ukuze unqume ukuthi imuphi upende ofaneleka kangcono iphrojekthi yakho yokwenziwa kwensimbi kanye nesabelomali.Khuluma nomphathi wephrojekthi ukuze uthole uhlelo lokusebenza olungcono kakhulu lokuqedela iphrojekthi yephrojekthi yakho.